By VOA , Syria
SYRIA - Isbaheysiga Mareykanka uu hoggaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda Daacish, ayaa billaabay hanaan ay uga soo baxayaan dalka Syria, sida uu maanta sheegay afhayeen u hadlay.
Madaxweyne Donald Trump ayaa bishii tagtay ku dhawaaqay go’aan uu kusoo saarayo 2,000 oo askari oo Mareykan ah, oo dalka Syria u jooga inay ciidamada Kurdish-ka ay hogaamiyaan ka caawiyaan la dagaalanka Daacish.
“Isbayahsiga waxay billaabeen qorshaha kasoo bixitaanka Syria. Sababo amni dartood ,ma bixin karo faahfaahino ku saabsan waqtiga, goobta iyo dhaqaaqa ciidamada” waxaa sidaas yiri Colonel Sean Ryan.
Xulufada Mareykanka ee Kurdish-ka waqooyiga Syria ayaa ka cabsi qaba in bixitaanka ciidamada Mareykanka ay waddada u furi doonto weerar uu Turkiga muddo qorsheynayey inuu halkaas ku qaado.
Duqeyn ka dhacday meel ku dhaw Caasimadda Syria
Caalamka 17.04.2018. 16:17